के गर्दैछ नेपाल - सुनाखरी न्युज
के गर्दैछ नेपाल
Posted on: May 21, 2020 - 10:38 am
रोशनी पाठक – करीब पाँच महिना हुन लागिसकेछ कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरुवात भएको पनि। चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसले हालसम्म विश्वको प्रायः सबै देशको भ्रमण गरीसकेको छ, भ्रमण मात्रै हैन लाखौं मानिसहरुको ज्यान पनि लिइसकेको छ। दिनानुदिन कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि यसको प्रकोप बढ्दो क्रममा छ। सयौं मानिसहरु यसबाट संक्रमित भइसकेका छ्न् र संक्रमित हुनेहरुको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा नेपालीको मृत्यु भएपछी कोरोनाले नेपालीलाई मार्न सक्दैन भन्नेहरु चुपचाप भएका छन्।
अहिले नेपालमा देशव्यापी रुपमा लकडाउन चलिरहेको छ।लकडाउन सँगै अस्तव्यस्त हुने ठाउँहरु श्वमसानघाट झैँ सुनसान छ्न। हरेक दिन सुत्नुभन्दा पहिले म भोलिपल्ट उठ्दा कोरोना भाइरसको विरुद्ध खोप वा औषधि बनेको खबर सुन्न पाइयोस् भन्दै कल्पना गर्दछु तर भोलिपल्ट ठिक विपरीत हुन्छ। जब म रेडियो, टि.भि. खोल्छु वा न्युज पढ्छु तब संक्रमणका कारण झन् भयावह र विकराल अवस्था आउन सक्ने भेउ लगाइहाल्छु। अनि अघिल्लो दिन राखेको आशा निराशामा परिणत भइहाल्छ। सायद विश्वभरिका मनिसहरुको हालत पनि यस्तै नै होला। हुनत विश्वभर यस भाइरसका विरुद्ध खोप वा ओखती पत्ता लगाउन अनुसन्धान त भइरहेको नै छ तर नेपाल भने के गर्दै छ?
कोरोनाको महामारी चल्दै गर्दा हाम्रो देशमा भने नेताहरुको बीचमा रँडाको मच्चिएको छ। लकडाउन चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग पनि भयो। यस्तै छिमेकी भारतले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरि सडक विस्तार गर्यो। मन्त्री परिषदले हिँउदे अधिबेशन आव्हान गरि बजेटको ढाँचा पनि तयार गर्यो तर बजेट कोरोना मैत्री भएन भनेर चौतर्फी आलोचना पनि भयो। यति भैसक्दा पनि नेताहरुले आफ्नो देशका बारेमा सोच्न सकेका छैनन्। देशभर अव्यवस्थित रुपमा संचालन भइरहेका आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। क्वारेन्टाइन भित्रै अरु रोगको महामारी फैलिन सक्ने ठूलो सम्भावना छ। अनि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरुलो परिक्षण पनि समयमा हुन सकेको छैन।
लाखौं नेपालीहरु अहिले बिदेशी भुमिमा छन्। उनिहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने तयारी सरकारले गर्दैन। सरकारसँग अब बोलेर आँखामा छारो हाल्नु बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। नातावाद र कृपावादले गर्दा कोरोना एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला भित्रिदै छ। संक्रमणले महामारीको रुप लिने सम्भावना हुँदा पनि आवश्यक कार्यनीति तयार हुन सकेको छैन। दिनानुदिन संक्रमण बढ्दै गर्दा परीक्षण कछुवाको गतिमा हुँदै छ। यस्तै अवस्था हो भने किन रोइस् मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भन्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन। त्यसैले अब सबै नेपाली मिलेर लकडाउनको पालना गरि कोरोना भाइरसबाट बचौँ। आफू पनि बचौँ अरुलाई नि बचाऔँ।